ညီမေ လး (စ/ဆုံး) – alanlaymyar
ဆယ်တန်းအောင်ပြီးကတည်းက အိမ်မာတစ်ယောက်တည်းနေ ဂိမ်းဆော့နေလိုက်တာ အချိန်တစ်နစ်ကျော်ခဲ့ပြီဗျ ဟိုဘက်ခြံက အန်တီလေးရဲ့သမီးတောင် 10 တန်းရောက်ပြီ အော် မေ့လို့ အန်တီဆိုတာက အန်တီအရွယ်မို့နော် သူ့နာမည်က ချိုရီလေ
” ရော့ထိုးမုန့် နင့်အမေဖို့ချန်ထားအုံးကြားလား”
“အော် အန်တီကလဲဒီလောက်အများကြီး မကုန်ပါဘူးဗျ”
“ထားပါ ဒါနဲ့နင်အားလား ဟဲ့ ”
” အားပါတယ် ဘာများခိုင်းမလို့လဲ”
” နင်ကစပေလဲဖတ်နေသူဆိုတော့ ငါ့သမီးနဝယ်နွယ်ကို စာသင်ပေးချင်မလားလို့ လစာတော့ ငါကြည့်ပေးမယ် ဟုတ်ပြီလား”
“အာမဟုတ်တာ ရပါတယ်ဗျာ ကျွန်တော်လဲ အားနေတာပဲကို ဘာမှပေးစရာမလိုပါဘူး အခမဲ့ပါ”
” မလုပ်ပါနဲ့ငါပေးရမာပေါ့ ”
“ဒါဆို မနက်ဖြန်လာသ်နော် နင့်ညီမက စာတွေနောက်ကျနေမာ”
မနက်ဖြန်ရောက်တော့ အိမ်ကိုသွားတယ်ဗျ ကျောင်းပိတ်ရက်ဆိုတော့ အချိန်ပိုရတာပေါ့
“အန်တီ အန်တီ ခြံတခါးဖွင့်ပါအုံး ”
” ဖွင့်ထားတယ်လေဝင်ခဲ့ မောင်ဇော်ရဲ့”
“လာလာ ဒီမာထိုင် ရော့အအေးသောက်အုံး”
ခဏတော့ ညီမလေးနွယ်နွယိရောက်လာတော့တာပဲ ….
ဟိတ် နင့်အကိုက နင့်ကိုစာသင်မဲ့ဆရာဖြစ်နေပြီ မစနဲ့ ..”
“ရပါတယ်ဗျာ မောင်နှမတွေပဲဘာမှဖြစ်ပါဘူး ကဲ စာသ်ရအောင်လေ ”
“ဟုတ် ပထမဆုံး မြန်မာစကြတာပေါ့ ထုပ်ထား စာအုပ်ကို”
“ကဲမောင်ဇော်အန်တီအလုပ်သွားအုံးမယ် ထမင်းစားပြီးမ ပြန်နော်”
ပထမနေ့မာ စာတွေကျက်ခိုင်းပြီးပြန်ခဲ့တယ် နောက်နေ့ရောက်တော့
“အင်းးးး မရသေဘူး”
ဆိုပြီးစိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ ဖင်ကိုလက်ဝါးနဲ့ ရိုက်လိုက်တာ ငိုရော့
ဒုက္ခပဲ အန်တီလာရင် ငါဆူခံရမာ ဆိုပြီးချော့ရတာပေါ့
“ညီမလေးတိပ်ပါတော့ကွာ အကိုက ညီမကို အောင်စေချင်လို့ပါ”
“ဘာမှလာမပြော သူ့အသားမနာတိုင်း ရိုက်တယ် မေမေနဲ့တိုင်ပြောမယ်”
“ဟား မလုပ်ရဘူးလေ ကိုကိုဆူခံရမာပေါ့”
” ဆူးခရြပစေသူများအသားတော့ နာအောင်ရိုက်ပြီး သူ့ကြတော့ သိပ်သိနေတယ်တာပေါ့”
“ဘာချစ်တာလဲ ချစ်ရင် ဘယ်သူ့မှ ကို့ချစ်သူကို နာအောင်မရိုက်ဘူး”
ဆိုပြီး ဘာမှမဆိုင်ပဲချစ်သူဖြစ်သွားတာဗျ နောက်နေ့တော့ အန်တီကလဲ အလုပ်သွားတာဆိုတော့ ပိုကောင်းတာပေါ့ ဆိုပြီ နှုတ်ခမ်းလေးကို နမ်းတော့တာပဲ
“ကိုယ်တော်ပြီ အသက်ရှူမဝတော့ဘဲ မကဲနဲ့ကွာ”
ဆိုပြီး နို့တွေကိုအနမ်းတွေပေးရင်းနဲ့လက်က သူ့ပေါင်ကြားထဲရောက်ပြီး ကမျင်းနေတာပေါ့ အချိန်ကြာ ကမျင်းပြီးတော့ ပစပ်က အသံလေးတွေထွက်လာတယ်ဗျ
ခါးလေးတွေကော့နေတာပေါ့ အဲ့အချိန် ကောင်းခန်းရောက်မှ မီးပျက်တယ်ဆိုသလို အန်တီရောက်လာတော့တာပေါ့
“မောင်ဇော် ပြန်တော့မလို့လား ထမင်းစားအုံးလေ ”
ဆိုပြီးပြန်ခဲ့တယ် အိမ်ရောက်တော့ အခန်းထဲမှ စိတ်ကူးရင်နေတာပေါ့ ညရောက်တော့ အန်တီအိအပ်ပြီဆိုမှ ခြံကျော်ပြီးသွားတွေ့တာပေါ့
“ကိုကလဲ ကြာလိုက်တာ စောင့်နေရတာကို့”
” ဘာအိမ်စာလဲ တော်တော်သီ”
” မဟုတ်ဘူးအချစ်က သင်ပေးတာလေ ”
” မဟုတ်ဘူး ချစ်ချင်တာပါ”
ဆိုပြီးနူတ်ခမ်းကိုဆွဲစုတ်ပြီး ဘယ်ဘက်လက်က သိုင်းဖက် ညှာဘက်ကနို့အုံးတွေကိုင်ပြီ နို့သီးခေါင်းလေးကို နိတ်ချေပေးနေရင်း လက်က ပေါင်ကြားထဲဆင်းပြီး စောက်ဖုတ်ပေါ်လက်ဝါးနဲ့ အုပ်ကိုင်ပြီး စောက်စေ့လေးကိုကမျှင်းတော့
“အင်း အင်း ကိုကောင်းလိုက်တာ လိုးပါတော့”
ဆိုပြီးပြောတော့ သူ့လက်ကကျွန်တော့လီးကို ဂွင်းထုသလို့ဆွပေးနေတယ်
“အင် ဒီလိုဆိုအဆင်ပြေလား ”
ကားထားတဲ့ပေါင်ကြားထဲကို ဒုးထောက်ဝင်ပြီး လီးကိုစပ်ပတ်ထိပ်တေ့ပြီ သွင်းတော့
” ခုတ် အားးး ကို ဖြေးဖြေးနားတယ်”
ဆိုမှပါကင်သိတတ်သွားတယ် လီးကို စတွေးဆွတ်ပြီး ဖြည်းဖြဘ်းသွင်းရတာပေါ့
” မနာပါဘူးညီမ ခဏပါကွာ”
“အားး အား ကို ပြဲကုန်ပြီလားမသိဘူး အား အား တော်ပါတော့ ကိုရယ် နာလို့သေတော့မယ်”
“ခဏပါ အောင့်ထား လီးကတစ်ဝက်ပဲ ဝင်သေးတယ် ”
ဆိုပြီးငြိမ်သွားတယ် လေ ဝင်သလောက်လေး လုပ်ပေးနေတော့
“အင်ကောင်းတယ် အီး အိုး”
“ကောင်းတယ် ကိုဆောင့်မြန်မြန်ဆောင့် ”
ဆိုပြီးအဆုံးဝင်သွားတယ် လီးကြီးပေါ်မှာ သွေးစလေးတွေပါခဲ့တယ်
” အာ ညီမရှက်တယ်”
“မရှက်ပါနဲ့ နောက်ဆိုနေ့လယ်တောင် လုပ်အုံးမာ”
” ကိုနော်လုပ်ပြီ ” ဆိုပြီး
“ရတယ် ကိုကြီးအတွက် ဘာလိုဆိုဆိုဖြစ်တယ်”
နောက်ကနေပေါင်ကြားထဲက နေရာယူပြီး လိုးတော့တာပေါ့
“အား ကို ပြီးသေးဘူးလား တအားနာနေပြီ”
” အင်းပြီးတော့မာပါ”
“အားးး ကောင်လိုက်တာ ညီမလေးရယ်”
“အင်ဟုတ်ပါပြီ ညီမလေးအိမ်ထဲဝင်တော့မယ်နော် ကိုကိုလဲပြန်တော့”
“အေပါ bye byeနော် အရမ်းချစ်တယ်အာဘွား ”
” အင် တူတူပဲလေ ….”
နောက်နေ့မနက်ရောက်တော့ မနက်စာတောင် မစားနိုင်ဘူးလွမ်းလွန်းလို့ ညလေးတို့အိမ် တန်းပြေးတော့တာပဲ
“အော် လာလေမောင်ဇော် ဘာစားပြီးပြီလဲ”
လာလေစားလာ ကော်ဖီသောက်ရင်း လာပါ”
“မောင်ဇော် မင့်ညီမ စာတွေရလား …”
“ညလေး လာပါအုံး ….”
“တော်ပါလူဆိူး လာဘူး ..”
“ကို့ မှာတော့လွမ်းလွန်လို့ အိပ်ရာထထချင်း ဘာမှမစားပဲ လာတွေ့လိုက်ရတာ”
“ချစ်ပါတယ် ဘာလဲ ဘယ်ဟာကိုလွမ်းတာလဲ”
” အောက်ကဟာကိုလွမ်းတာ …..”
“ဖြစ်ရတယ် ကိုယ်ကိုကံဆိုးတာပဲလွမ်းမနေနဲ့ ဒီနေ့ မီးနီပြနေတယ်”
” …ဟာသွားပါပြီကွာ အားခဲထားလိုက်ရတာကို ဒါဆို ဘယ်နစ်ရက်ကြာမာလဲ”
“ဒါပေါ့စား ပြီးစာသ်ကြမယ်လေ …”
” ဘာမှလုပ်ပါဘး စကားပြောမလို့ပါ….”
ညနေရောက်ပြီ သွားဖို့အသင့်ပြင်နေတုန် အောက်ကလီးကတောင်နေတာလေ ညီလေး မင်းတော့ငတ်ပြီထင်တယ်ကွာ ကို့လီးကိုပြောပြီး ဖြေသိမ့်နေရတာပေါ့ ညကြတော့ အရင်ကြိုရောက်နေနင့်တာဗျ
ဆိုပြီအိမ်နားလေးသွားတော့ အန်တီချိုရီ ရေချိုးနေတာတွေ့တေည့ ဒါကြောင့်မို့ မလာသေးတာကို ကျွန်တော်လဲ အချိန်ရှိခိုက် လုံးလှစိုက်ဆိုသလို ချောင်းတာပေါ့ဗျာ အော် မေ့လို့ အန်တီချိုရီက ယောက်ကျားမရှိတော့ဘူး ဆုံးတာ ၃နစ်လောက်ရှိုပြီဗျ ကြည့်ရတာ သမီးထက် တောက်တောင့်တင်းနေတာဗျ စပ်ပတ်ကမို့မို့လေး ရေတွေကစီးဆင်းနေတာ စောက်မွေးလေးပေါက်က စီးနေတော့ ကြည့်ကောင်းတ်ာဗျ ဆပ်ပြာတိုက်တော့လဲ တစ်ကိုလုံးတိုက်ပြီး စပ်ပတ်ကြီးထဲ ဆပ်ပြာခဲထိုးပြီးမွေနေတာ ကြည့်လို့ ကောင်းလိုက်တာ အောက်ကညီတော်မောင်က ဘယ်လိုမှမရတော့ဘူးထနေပြီ အန်တီချိုလဲ ရေချိုးပြီးတော့ ထွက်သွားတော့တာပေါ့ ခဏနေတော့ ညလေးရောက်လာတယ်လေ
တွေ့ တွေ့ချင်းနုတ်ချမ်းကိုနမ်းပြီးလက်က နို့အုံပေါ် ရောက်သွားတော့တာပေါ့ နို့သီးခေါင်းကို လက်လေးနဲါချေထားပြီ အောက်အဆင်းမှာ ညီမလေးက ….
ဆိုတဲ့သတိပေးတဲ့အချိန်မှာအကြံရတာ့ စပ်ပတ်မလိုးရလဲ ဖင်ချမယ်ကွာဆိုပြီး
” ဟင်ပြောလေ ..”
“ဟင်ကိုကိုကလဲ လုပ်ပါနဲ့ ..”
“ကိုကိုလီးကတောင်နေတယ် ကြာရင် ပေါက်င်္ကဲလိုက်မယ် သိလား ”
” ..လီးတောင်တာ ကြာရင်ပေါက်ကွဲလား ..”
“အင်လေ နော် ပေါက်ကွဲမှ ညလေးမခံရဖြစ်နေမယ် သိလား …”
“အင်းဒါဆိုလဲ ကို့ကို့သဘောလေ လုပ်ချင်လဲလုပ်ပေါ့ ”
” ..ချစ်ရင်မုတ်ပေးပါလား ..”
” ..အော် ကို့လီးကို စုပ်ပေးပါလားလို့ပြောတာ”
” …ဟွန်းရွံစရာကြီးကိုများ ပြောနေသေးဝေးသေး”
“ညခေးကလဲ ကိုရေနဲ့သေချာဆေးထားပါတယ် …”
” ဟုတ်မာ အားကြီးကြီးနံတယ် …”
“ဗြွတ် …အဟင့် …အဟင့်”
ဘာမှကောင်းဘူး လူလိမ်းလူညစ်ပတ် ….”
“ထားပါ လုပ်လက်စနဲ့ ပြီးအောင်လုပ်ပေးနော်..”
“ထိပ်လေးကို လျှာလေးနဲ့ကလိလိုက် အဲ့လိုလုပ်ပြီး စွပ်လိုက် အဆုံးထိဖိစုပ်လိုက် ညလေး ဂွင်းတိုက်ပေးသလိုပဲလေ…”
“အင်ပါဟုတ်ပြီ ဒါဆိုလဲလုပ်ရမာပေါ့ ချစ်လို့နော် ..”
“အား …..အား ..”
“ဗြွတ် ..ဗြွတ် ..”
နဲ့လီးစုပ်ရတဲ့အရသာသိနေပြီထင်တယ် သကြားလုံးစုပ်သလိုငုံထားတာပဲ …
“အား… ညလေးတော်ပြီ ရပြီ ကုန်းပေးတော့ …
“အင်… ဖြေးဖြေးနော်တစ်ခါမှခံဘူးဘူး ချစ်လို့ အရဲစွန့်ခံရမှာပြဲကုန်မယ် …”
ဆိုပြီးကားထားတဲ့ခြေထောက်နစ်ခုကြားထဲနေရာယူပြီတံတွေးတွေရဲနေတဲ့လီးကို ဖင်စအိုဝတေ့တော့ တွန့်သွားပြီးဖင်ရှုံ့ထားတာဗျ…
“ညလေးမရှုံ့ ထားနဲ့လေ …”
“အော်ကြောက်လို့ ပါ ရပြီလား”
“အား…အမေရေပြဲပါပြီ တောာ်တော့ မရဘူးထင်တယ် …”
ကျွန်တော်လဲဝင်သွားတဲ့ဒက်ကို မထုပ်ပဲ ဆက်သွင်းတော့
“အားးးး အားးးး ကို မလုပ်ပါနဲ့တော့ ..”
ကျွန်တော်လဲ ပုံမှန်လိုးပေးတော့ …
လက်ဗျင်နဲ့ဖင်နဲ့ရိုက်သံတွေထွက်နေတာပေါ့ .. ခဏကြာတော့ ညီမလေးပစ်က
“အင်းးးး အင်းးး ကိုကိုလုပ် ခံလို့ကောင်းတယ်”
ဆိုပြီ အတင်းလ်ုခိုင်တော့ အားမနာတမ်း ဆောင့်တာပေါ့
ဖင်ဆိုတာကကြပ်နေတာတာဗျ အတော်ကြမှ အနေတော်ဖြစ်လာတာဆိုတော့ လီးတွေကလဲ ပူပြီးကြင်နေတာပေါ့ လုပ်ရင်းလုပ်ရင်းနဲ့ လရီတွေဖင်ထဲ ပန်းထည့်ပြီး သူ့အပေါ်မောက်ပြီး မိန်းနေခဲ့တာပေါ့ ဟာသနော် သူ့များကိုတာ လုပ်တာ ကို့ အလည့်ကတော့ မီးခြစ်ဆံခေါင်းတောင် အဝင်မခံချင်ကြဘူးသိလား
ဒီလိုစားနေလိုက်တာ ညလေးဆယ်တန်းအောင်လို့ တက္ကသိုလ်သွားရတော့မယ်
“ညီမလေးရယ် ပညာရေးပဲလေ ဒါနဲ့ ဘယ်တော့သွားမာလဲ …..”
“နက်ဖြန်လေ … ဒါဆို ညကြရင် နုတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ တွေ့ရအောင်လေ နော် ..”
” ..ဟုတ် ..”
ကျွန်တော်လဲအမုန်းဆွဲမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ နာရီတကြည့်ကြည့်နဲ့ စောင့်ပြီးမျော်ဆာကြီးပေါ့ ..ညနေလဲ ရောက်တော့ သွားတွေ့တာ့ သူမရောက်သေးဘူး ..ဟာ ညလေးက ဘာလို့ မရောက်လာတာပါလိမ့် စိတ်ပူတာကတစ်ပိုင်းးမလာတော့ဘူးလားဆိုပြီး စိုရိမ်နေရပြီ နောက် တော်တော်ကြာစောင့်ပြီးမလာတော့ ဘူးထင်ပြီး ပြန်မယ်အလုပ် …
“လာမာပေါ့ ကိုကိုကလဲ ”
” .လာထိုင်အချိန်ရှိခိုက်လုံးလစိုက်ရအောင် ..”
“မနေ့ဖြန်ခွဲရမယ်ဆိုတော့ ဒီညအမုန်းဆွဲမယ် နော် ..”
“အဲ့လိုလဲမဟုတ်ဘူးလေ မတွေ့ရမဲ့ ရက်အတွက်ပြောတာပါ ..”
ကျွန်တော်တို့ချိန်တာက သူ့အမေအခန်းနားမှာဗျ မုတ်ဆိုးမ ဆိုတော့ ဖင်တွေကလဲကားနေတာလေ နိ့တွေကလဲ သမီးထက်မကဘူး တော်တော်ထွားတာဗျ ကဲညလေးနဲ့ ဘာဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဗျာ ..
“ညလေး နောက်ဆုံးနုတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ ကို့ကိုမုတ်ပေးပါလား ..”
“ဟွန် ရွံစရာကြီး ..”
“လုပ်ပါ ဟိုတစ်ခါတုံးကတောင် လုပ်ပေးသေးတာပဲ ..”
“ကို့အိမ်မက်ထဲမှာလေ လုပ်ပါ ချစ်ရင်တော့ လုပ်ပေးရမယ်ကွာ”
ဆိုတော့မျက်နှာပျက်သွားတယ် ဗျ ကျွန်တော်လဲ သူ့လက်ကိုကိုင်ပြီး ဂွေးကိုကိုင်ခိုင်းထားတာပေါ့ တော်တော်လေးကြာတော့ တောင်လာပြီဆိုတာနဲ့
“ဘလေးလုပ်ပေးတော့လေ နော် ..ဒီတစ်ခါပဲနော် ..”
ဆိုပြီးလီးကြီးကိုပစပ်ထဲငုံထည့်လိုက်တား လီးကို ပူပြီးကောင်းလိုက်တာဗျာ
“ဗျွတ်ပြွတ် ပြွတ် ”
တစ်ခါတစ်ခါ ဖီတက်နေတုန်စပ်ပပ်လိုးသလို အောက်ကနေကော့ထိုးလိုက်တာ ….
“အဟွန်းအဟွန်း ဘာဖြစ်တာလဲ တော်ပြီ မလုပ်ပေးတော့ဘူးကို့လီးက အာခေါင်ထဲထိ ရောက်တာ်”
ဆိုပြီ ပြန်စုပ်ခိုင် တာ ဗျ .. ကုံးနေတဲ့ဖင်လေးကို နိုက်ပြီး ကလီပေးနေတာ လက်မှာ အရည်လေးတွေတောင် စို့လာပြီ ..
“ညလေးထတော့ အပေါ်ကထိုင်ချပေးတော့ ..”
“အားးး ကောင်းလိုက်တာ ”
“အင် သိပ်ကောင်းပဲ ပြီးတော့မယ် မြန်မြန်လေး”
ဆိုပြီးး ဂျက်ညီညီဆောင့်ပေးတာ ထွက်သွားပါလေရော့……။
Posted on November 11, 2019 Author alanlaymyar
Posted on October 18, 2019 October 18, 2019 Author alanlaymyar
**** ကာမမျက်ကန်း ရမ္မက်လွှမ်းသော် **** ( စ / ဆုံး ) ====================== ( ဗလ ) ကျောင်းမှပြန်လာသောပိုးအိလွင်တယောက်အိပ်ခန်းထဲရောက်သည်နှင့် ကျောပိုးအိပ်လေးကိုအသာချကာ ရေချိုးဖို့ပြင်သည်။တံခါးလည်းလော့ချပြီးသား ပြူတင်းပေါက်ခန်းစီးတွေလည်းပိတ်ပြီးသားမို့ လွတ်ဘွတ်လပ်လပ်ပင်အဝတ်တွေတခုပြီးတခုချွတ်ကာ အိပ်ခန်းနှင့်တွဲလျက်ရှိသောရေချိုးခန်းထဲဝင်ခဲ့သည်။အိမ်မှာက အိမ်ဖော်များအတွက်မှလွဲလျင် Master bedroom တွေချည်းဖြစ်သည်။ဖေဖေနှင့်မေမေကတစ်ခန်းlသူမကတစ်ခန်းlမမ နှင်းအိလွင်ကတစ်ခန်းlဧည့်သည်များအတွက်ထားသောအိပ်ခန်းသုံးခန်းလည်းရှိသေးသည်။ဖိုးဖိုးရှိစဉ်က အိပ်ခန်းလည်းအခုတော့ ဧည့်သည်ခန်းထဲပါသွားပြီ။မနှစ်က သူမစာမေးပွဲရက်မှာ ဖိုးဖိုးကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်။ဖေဖေနဲ့မေမေမှာ ပထမတော့ သမီးနှင်းအိလွင်တယောက်သာရှိသည်။နှင်းအိလွင်ဆယ်နှစ်သမီးအရွယ်ခန့်မှာ ဖိုးဖိုးငယ်သူငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့တဦးတည်းသောသားဖြစ်သူ အသက်သုံးဆယ်အရွယ်မှာကွယ်လွန်သွားတာကိုမြင်တော့ ဖေဖေနဲ့မေမေကို ဖိုးဖိုးကနားချသည်။သားသမီးတယောက်တည်းမွေးထားခြင်းဖြင့် မိဘများအရွယ်လွန်ချိန်ကျမှ သားသမီးဆုံးပါးသွားခဲ့လျင် မိမိမျိုးဆက်မကျန်နိုင်ကြောင်း မိဘများကအရင်ကွယ်လွန်ခဲ့လျင်လည်း လောကအလယ်တွင် ကျန်ခဲ့မည့်သားသမီးအနေဖြင့် အရင်းဆုံးဆွေမျိုးဟူသည်မှာ တဝမ်းကွဲသာဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းကိစ္စကြီးငယ်ပေါ်ပေါက်လာပါက မောင်နှမအရင်းအခြာကသာ ကျောချင်းကပ် ရင်ချင်းအပ်လေ့ရှိကြောင်း စသည်ဖြင့်နားချသောကြောင့် ပိုးအိလွင်ကိုထပ်မွေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ဖိုးဖိုးကလည်း မြေးအငယ်ဆုံးလေးကိုတုန်နေအောင်ချစ်သလို သူမဆန္ဒမှန်သမျှအကုန်ဖြည့်ဆည်းပေးသောဖိုးဖိုးကိုသူမကလည်း အလွန်ချစ်ခဲ့သည်။သူမကိုအလွန်ချစ်သောဖိုးဖိုး သူမကလည်းအလွန်ချစ်သောဖိုးဖိုးကွယ်လွန်တော့ သူမစာမေးပွဲဆက်မဖြေနိုင်တော့။ ထို့ကြောင့် ဆယ်တန်းကိုပြန်တက်နေရခြင်းဖြစ်သည်။Car […]